မဲဆှယျထှကျကွတဲ့သူတှကေို ဖောငျကွီးကနေ စောငျ့နမေယျဆိုပွီး ကရုဏာဒေါသောနဲ့ ပွောလာတဲ့ မောငျ – Askstyle
ပရိသတ်ကြီးရေ အကယ်ဒမီမင်းသမီးချော နန္ဒာလှိုင်ရဲ့မောင်လေး သရုပ်ဆောင်မောင်ကတော့ မကြာခင်ကမှာ Covid ရောဂါကုသပျောက်ကင်းသွားခဲ့ပြီး အိမ်ပြန်ရောက်တာ (၃)ရက်ပဲ ရှိသေးပေမယ့် ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖောင်ကြီး covid ကုသရေးဌန ဆေးရုံကြီးမှာ Volunteer လုပ်ဆောင်နေပါတယ်နော်။ မိသားစုတွေ စိတ်ပူနေတဲ့ကြားက Covid ရောဂါ တိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ကာ အန္တရာယ်အများဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့ ဖောင်ကြီး Covid ကုသရေးဌာနကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့တဲ့ မောင်ရဲ့ စိတ်သဘောထားကိုတော့ အားလုံးက ချီးကျူးဂုဏ်ပြုနေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးကြိုးစားအားဖြည့် ပါဝင်နေတဲ့ မောင်ကတော့ သူကိုယ်တိုင် Covid ရောဂါ ကူးစက်ခံရပြီး ဆေးကုသမှုတွေ ခံယူနေတဲ့အချိန်မှာလည်း အခြားလူနာတွေကို ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်နော်။ မောင်ကတော့ အခုလို Covid ကပ်ရောဂါတွေ ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေ များပြားနေတဲ့အချိန် လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့ သူတွေအချို့ကို ကရုဏာဒေါသောလေးနဲ့ သတိပေးစကားလေး ဆိုလိုက်ပါတယ်နော်။
“မဲဆွယ်ထွက်ကြတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတို့ရေ! အစ်ကို ဖောင်ကြီးကစောင့်နေပါတယ်နော်” ဆိုပြီး မောင်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာမှာ ရေးသားပြောထားတာဖြစ်ပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကလည်း စနောက်ထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်နော်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း လူစုလူဝေးတွေရှောင်ကာ အတတ်နိုင်ဆုံး အိမ်မှာပဲ Stay Home နေပြီး မဖြစ်မနေအပြင်ထွက်ရင်လည်း ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းတွေကို စနစ်တကျလိုက်နာကာ ကပ်ရောဂါကာလကြီးကို အားလုံးနဲ့အတူ ကျော်ဖြတ်ကြရအောင်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ အကယျဒမီမငျးသမီးခြော နန်ဒာလှိုငျရဲ့မောငျလေး သရုပျဆောငျမောငျကတော့ မကွာခငျကမှာ Covid ရောဂါကုသပြောကျကငျးသှားခဲ့ပွီး အိမျပွနျရောကျတာ (၃)ရကျပဲ ရှိသေးပမေယျ့ ဆရာဝနျတဈယောကျအနနေဲ့ ဖောငျကွီး covid ကုသရေးဌန ဆေးရုံကွီးမှာ Volunteer လုပျဆောငျနပေါတယျနျော။ မိသားစုတှေ စိတျပူနတေဲ့ကွားက Covid ရောဂါ တိုကျဖကျြရေးအတှကျ ကိုယျကြိုးစှနျ့ကာ အန်တရာယျအမြားဆုံးနရောဖွဈတဲ့ ဖောငျကွီး Covid ကုသရေးဌာနကို ကိုယျတိုငျသှားရောကျခဲ့တဲ့ မောငျရဲ့ စိတျသဘောထားကိုတော့ အားလုံးက ခြီးကြူးဂုဏျပွုနတောလညျး ဖွဈပါတယျနျော..။
ဆရာဝနျတဈယောကျအနနေဲ့ အကောငျးဆုံးကွိုးစားအားဖွညျ့ ပါဝငျနတေဲ့ မောငျကတော့ သူကိုယျတိုငျ Covid ရောဂါ ကူးစကျခံရပွီး ဆေးကုသမှုတှေ ခံယူနတေဲ့အခြိနျမှာလညျး အခွားလူနာတှကေို ကွညျ့ရှု့စောငျ့ရှောကျပေးခဲ့ပါသေးတယျနျော။ မောငျကတော့ အခုလို Covid ကပျရောဂါတှေ ကူးစကျပွနျ့နှံ့မှုတှေ မြားပွားနတေဲ့အခြိနျ လူစုလူဝေးနဲ့ မဲဆှယျထှကျကွတဲ့ သူတှအေခြို့ကို ကရုဏာဒေါသောလေးနဲ့ သတိပေးစကားလေး ဆိုလိုကျပါတယျနျော။
“မဲဆှယျထှကျကွတဲ့ ညီလေး ညီမလေးတို့ရေ! အဈကို ဖောငျကွီးကစောငျ့နပေါတယျနျော” ဆိုပွီး မောငျက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘှတျစာမကျြနှာမှာ ရေးသားပွောထားတာဖွဈပွီး ခငျမငျရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးတှကေလညျး စနောကျထားကွတာ တှရေ့ပါတယျနျော။ ကဲ ပရိသတျကွီးတို့လညျး လူစုလူဝေးတှရှေောငျကာ အတတျနိုငျဆုံး အိမျမှာပဲ Stay Home နပွေီး မဖွဈမနအေပွငျထှကျရငျလညျး ကနျြးမာရေးစညျးကမျးတှကေို စနဈတကလြိုကျနာကာ ကပျရောဂါကာလကွီးကို အားလုံးနဲ့အတူ ကြျောဖွတျကွရအောငျနျော။